IPangolin - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
IPangolin, iPangolin yomhlaba, eyaziwa nanjenge Temminck's Pangolin okanje iPangolin yase Koloni (Manis temminckii).
IPangolin inobude obungaphaya kwe 1m nobunzima obufikelela ku 18Kg.
Umzimba ukhuselwa lukhakha lwamaqweqwe amdaka ngombala, nto leyo eyenza esi silwanyana sibe sesikhethekileyo kunezinye izilo. Ngaphandle kwebunzi akukho maqweqwe entloko okanye esiswini, nasemiphakathweni yemilenze.
Iinzipho zokuqala nezokugqibela zicuthekile, zize ezi zinthathu ziphakathi zibende yaye zomelele ukulungiselela ukugrumba umhlaba. Imilenze yangaphambili nayo mifutshane kunale yangemva. Umsile ombhaxa uyakwazi usongana ujikeleze umzimba.
Kuba iPangolin iphila ngezinambuzane kuphela, ubunintsi be mbovane neentethe, bubo obulawula ubukho bazo kwindawo ezithile. Omnye umba ubukho bazo obuxhomekeke kuzo, bubukho bemingxunya okanye ezinye intlobo zokufihla intloko. Ubukhulu becala zitya ubutsunu.
IPangolin zikhangeleka njengezinobu cukucezi ngezinto emazizitye, kangangokuba zili 19 kuphela iindidi ze mbovane neentethe ezi zityayo. Ixhoba zilibona noba sele liphantsi komhlaba. Zithi zakulibona ixhoba, zombe itonela ngezonzipho zazo zomeleleyo zangaphambili.
Ulwimi olu mbombosholo olunobude obungama 250 mm, lugqunywe ngamathe ancangathi. Lusetyenziswa ke ukuqokelela amaxhoba, ngokuthi lufakwe kulamatonela. Lukhutshwe selugcwele ngamaxhoba ancamatheleyo, luthiwe tshwa emlonyeni.
Lendlela yokutya ke iphindwa-phindwa kali 90 ngobusuku, ibangumzuzu omnye ngexesha ukuqokelela oku kutya. Kuba ingenamazinyo, Isanti engine emlonyeni incedisa ukucola ukutya emlonyeni.
Isibini se Pangolin, sidibane ithutyana elinye ukuya kumabini entsuku, ngenyanga yoKwindla. Ukumithisana kwenzeka ngokuthi enye ibesecalen kwenye, inkunzi itshove umsila wayo phantsi kwe mazi ukuncedisana noku.
Imazi izala intshontsho elinye emva kokumitha iintsuku ezingama 135. Zizala kwinyanga yeKhala okanye eyeThupha. Amantshontsho ancanciselwa emhadini, apho aye ashiywe khona xa unina eyokuzingela ukutya. Amantshontsho avamise ukuthuthelwa kumhadi omtsha emva kwenyanga yokuqala.
IPangolin zikuxhobele ukuzikhusela. IPangolin iye izisonge oku kwebhola xa isengozni. IPangolin zomthi zizisonga okwebhola kwi gobhoza lomthi ebusuku xazilala. IiPangolin zingazikhusela ngamaqweqwe azo abukhali.
Zikwanalo nevumba elifana nele qaqa, eziye zilisebensise ukutshiza utshaba. IiPangolin ziyakwazi ukuhamba ngawo omane, kodwa ukunysa isantya zima ngenyawo ezimbini, zisebenzisa nomsila wazo omde ukuxhasa. Zibaleka ngesantya esibalelwa kwi 5 km nge yure.
Zikholwa kukuhlala kwindawo enemithi eyomileyo engafane inethe (savannah), kodwa zikwafumaneka kwindawo ezinengca emanzi, ingxondorha zamatye, nakwindawo ezine santi. Azifumaneki entlango nasehlathini.
Emzantsi Afrika iPangolin zixhaphake kakhulu kwimimandla eyayikade ibizwa nge mpuma,mntla nentshona Transvaal, umntla wa KwaZulu-Natal, umntla ntshona we Koloni, apho ke ubukho bazo buye buqhubekeke kumazwe asebumelwaneni.
Amanqaku Enza Umdla
IiPangolin zisengozini yokuphela kuba ufele lwazo lwenza ibhutsi zofele ezinomtsalane, ziyafana ne bhutsi ezenziwe ngofele lwenyoka okanye olwe armadillo. Yaye, iPangolin ziyatyiwa kwamanye amazwe. Zisixhenxe kuphela indidi zezilwana ezibalelwa phantsi kosapho lwe Pholidota, iiPangolin zizilwanyana ezinoqwewe ezitya iimbovane. Zine iindidi zazo ezise Afrika, zize zibene ezise mzantsi-ntshona Asia.
IiPangolin zaphinda zathi saa umhlaba wonke jikelele ngobuninzi, enye ekhangeleka njengezizangoku ibe ikudala yabakhona, ebizwa nge Eomanis, ifumaneke kwi Eocene yase Jamani, nenye futhi iPangolin ifumaneke kumazantsi e Oligecene ase Mntla Melika.
Kulemihla, ngenxayokuchithwa chitwa kwendawo ezihlala kuyo nozingelo (Amaqweqwe e Pangolin asetyenziselwa amayeza ase China nase Afrika), ezi ndidi zintathu zase Asia nenye kwezi zase Afrika zibalelwa kwezi sebungozini bokuphela.
Igama lesi Latin: Manis Temminckii
Ubunzima (Imazi): 4,5 - 14,5 kg
Ubunzima (Inkunzi): 4,5 - 14,5 kg
Ubude (Imazi): 80 cm
Ubude (Inkunzi): 80 cm
Ixesha lokumitha: ± 4 months
Inani lamantshontsho: 1
Ukuzala: Intshontsho elinye lingazalwa ukususela kweyeCanzibe-eyeKhala. Emva kokumithwa inyanga ezine.
Imizila ibonisa isangqa senyawo zangemva kumaxa amaninzi kubakho nenzipho ezine ezikrweca phantsi, maxa wambi nomsila oye urhuqe nophawu lwekona zenzipho ezinde ezigobileyo zangaphambili.
Eli gama le Pangolin lisuka kwigama lwe Malay, pengguling, nelithetha ukuzisonga kwaye lichaza umkhwa we Pangolin wokuzisonga ibeyi bhola xa lisengozini. Ngenxa yalemikhwa iPangolin sisilwanaya esinqabileyo esingafane sibonwe ngabatyeleli be safari, yaye ibasesona silwananyana abantu banomdla wokusibona.